नायिका रेखाको कार दुर्घटनामा मृत्यु…
एजेन्सी – भारतको कर्नाटककी कलाकार रेखा सिन्धुको मृत्यु भएको छ।उनको बेंगलरु हाइवेमा कार दुर्घटनामा मृत्यु भएको बताइएको छ । चेन्नइमा बस्दै आएकी रेखाको दुर्घटनामा परेलगत्तै मृत्यु भएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । रेखासँगै अभिषेक कुमारन, जयांकंद्रन र रक्षन नामका व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको छ। उनी बलिउडमा टिभी कार्यक्रम तथा
दिक्पाल लागे “लाहुरेको छोरी” प्रमिलाको पछि…(हेर्नुस् भिडियो)
गायिका प्रमिला तामाङको स्वरमा रहेको “लाहुरेकी छोरी” को बोलको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । टिका भक्त जिरेलको शब्द रहेको गीतमा नारायण लामाको संगीत सुन्न सकिन्छ । गीतमा गायिका प्रमिला आफैले मोडलिङ गरेकी छिन् भने उनलाई नायक तथा मोडल दिक्पाल कार्कीले साथ दिएका छन् । भिडियोमा दिक्पाल प्रमिलालाई आफ्नो बनाउने
मनिषा कोइराला अभिनित चलचित्र ‘डियर माया’ ट्रेलर रिलिज.. (हेर्नुस भिडियो)
मनिषा कोइराला अभिनित बलिउड चलचित्र ‘डियर माया’ ट्रेलर रिलिज भएको छ । मनिषा, डायरेक्टर इम्तियाज अलीका असिस्टेन्ट सुनैना भटनागरको फिल्म ‘डियर माया’ मा उनले एक पाको, निरिह महिलाको भूमिका निर्वाहा गरेकी छिन् । उनी उपचारका लागि ६ महिना अमेरिका बसिन् । २ मे, २०१३ माम मनिषा पूर्ण रुपमा क्यान्सरबाट मुक्त
यी सुन्दरी को हुन् ?,कसरी भयो “रंङ्ग टाइम”यी सुन्दरीको ?
नेपाली समाजमा धेरैजसो अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी राम्रो पढेर डाक्टर, इन्जिनियर भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्छन् । तर केही यस्ता अभिभावक पनि छन् जसले छोराछोरीको चाहनालाई आत्मासाथ गर्दै उनीहरुको रुचीको क्षेत्रमै लाग्न प्रोत्साहन दिने गर्छन् । यस्तै एक भाग्यमानी युवती हुन आश्मा गिरि जसलाई आफुले चाहेको क्षेत्रबाट अघि बढ्न अभिभावकले हौसला
प्रेमीले खिचेको प्रेमिकाको नग्न तस्बिर सोसल मिडियामा हिट …(तस्बिर सहित )
एजेन्सी – २५ वर्षीय न्यूजिल्याण्डकी एक मोडलले माउन्ट तारानाकी माथि उभिएर खिचेको तस्बिरले बबाल मच्चिएको छ । फोटोमाथि मानिसहरुले आपत्ति जनाउनुको कारण मोडलले पूर्ण नग्न भएर पहाडमाथि फोटो खिचाउनु हो । २५ वर्षीय मोडल जेलिन कुकुले इन्स्टाग्राममा एक नग्न तस्बिर सेयर गरेकी छिन् । उक्त फोटोमा उनले जुत्ता र टोपीमात्र लगाएकी
सार्वजनिक प्रोग्राममा पलले राखे पूजालाई प्रेम प्रस्ताव….(हेर्नुस् भिडियो)
चलचित्र “म यस्तो गीत गाउँछु”को शीर्ष गीत सार्वजनिक गरिएको छ । आईतवार राजधानीमा नायिका पुजा शर्माको बर्थडेको अवसरमा चलचित्रको “भन्छु आज”बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो । सार्वजनिक प्रोग्राममा पलले राखे पूजालाई प्रेम प्रस्ताव:-
हलीउड स्टारको चलचित्रलाई समेत पछारो बाहुबली २ले …
चलचित्र “बाहुबली २”ले पहिलो दिन १२१ करोडको विजनेश गरेको थियो । चलचित्रको क्रेज भारतमा मात्र होइन विदेशमा पनि उतिक्कै लोभलाग्दो छ । इन्टरनेशनल लेभलमा पनि”बाहुबली २ : द कनक्लूजन” ले कमाईको मामलामा सबै रेकर्ड तोडिसकेको छ । चलचित्र “बाहुबली २”ले एम्मा वाटसन र टम ह्याक्स जस्ता ठूला हलीउड स्टारको चलचित्रलाई
“लालटिन”मा प्रियंका हट हुदा, दया डन… (हेर्नुस भिडियो)
काठमाडौँ – चलचित्र ‘लालटिन’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक ट्रेलरमा रोमान्स, खुसि, पिडा र एक्सन दृश्य समावेश छन् । भानु प्रतापको प्रस्तुतीमा अनिम श्रेष्ठ र राज केसीको लगानी रहेको चलचित्रलाई देवकुमार श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा प्रियंका कार्की, दयाहाङ राई, अर्जुनजंग शाही, ए गुरुङ, शिशिर भण्डारी, मेलिना मानन्धर, केकी
प्रियंकाको फिल्ममा जेनिशाको रोमान्स…
बलिउडका चर्चित अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको कम्पनीबाट बनिरहेको भोजपुरी फिल्ममा नायिका जेनिशा केसीले काम गर्ने भएकी छिन् । उनले भोजपुरीका अभिनेता रवि किसनसँग फिल्ममा जेनिसा मुख्य भुमिकामा रहने बताइएको छ । उनी फिल्म सुटिङकै लागि गोवा जाने तयारीमा रहेको बताइएको छ । पहिल्यै देखी फिल्ममा काम गर्ने कुरा भएकाले जेनिससाले काम
प्रदीपले सकाए मार्केटिङमा मास्टर्स…,अब के गर्दै छन् प्रदीप ?
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रदीप खड्का दर्शकहरुका लागि यो नाम सबैभन्दा प्रिय बन्दै गएको छ । चलचित्र “प्रेमगीत” मा ‘प्रेम’ को भूमिका निर्वाहा गरेपछि नायक प्रदीप खड्का रातारात स्टार बने । प्रदीपको दोस्रो चलचित्र “प्रेमगीत” ले भने प्रदीपलाई नसोचेकै सफलता दिलायो । प्रदीपको तेस्रो प्रोजेक्ट ‘प्रेमगीत २’ साउन १३ गतेबाट रिलिज हुदै छ ।